पुरुषहरु महिला बनाम: जो राम्रो खेलिन्छ?
जुन 18, 2019	Casino.com समाचार र क्यासिनो बोनस
त्यसोभए जब क्यासिनो खेलहरूको कुरा आउँछ, यो कुन लिंगलाई कौशलता, प्रतिबद्धता, र जित्ने क्षमता छ परिभाषित गर्न सम्भव छ? त्यहाँ विजय प्राप्त गर्न को लागी एक ढाँचा छ? र यो सम्बन्धित छ
जुआ तथ्य वा जुवा कल्पना?
हामी सबै जूवाको वरिपरिको मिथ्या र किंवदन्तीहरु को सुन्न। ठूला जीत, अपमानजनक दांव, महाकाव्य भाग्यशाली रेखाहरू को विवरणहरू सधैं प्रसारित हुन्छन्, विवरणहरू विस्तारकर्तामा निर्भर गर्दै वा घट्दै जान्छ - त्यसैले हामीले सोचे कि यो हाम्रो लागि उच्च समय हो।
निकल्स र क्राइम्स: लास वेगासलाई हराएको मानिस
क्रूर - फ्लो खेल
रोमन दर्शन लुइसियस अन्नास सेनेका एक पटक प्रसिद्ध रूपमा यसो भनिन्: "लख के हुन्छ जब तयारीले मौका पाउँछ।" 2,000 वर्ष पछि - उहाँका शब्दहरू अझै पनि सत्य रङ्ग हुन्छ।
यदि तपाईं केही समयको मजा लिने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने
कैसीनो र जुआ गीतहरू - हाम्रो शीर्ष पिक्सहरू (भाग 1)
'यो मौसम रमाइलो हुने छ र मानिसहरूले यस बर्षको समयमा धेरै बढी गीत गाउँछन्, त्यसैले उत्सवहरू चलिरहेको बेलामा हामीले सोचेका थियौं
कैसीनो र जुआ गीतहरू - हाम्रो शीर्ष पिक्सहरू (भाग 2)
हाम्रो छनौटको शीर्ष क्यासिनो गेम्स र जुआबाट जारी राखिएका गीतहरू त्यहाँ बाहिर गएका छन्, यहाँ हाम्रो केही मनपर्नेहरू छन् - र एक पूर्ण ब्लूपर जसले हाम्रो 'कुन कुरा सुन्न नसक्ने' श्रेणी बनाउँछ।
क्यासिनो खेलहरू पछि मिठाईहरू नामाकरण गरियो
भोलि? तपाईं हुनेछ ... यो हप्ता, हामी हाम्रो दाँत मिठाईको शब्दावली मा फँसिरहेका छौं। खेलको साथमा राम्रो चहचहाना के हो? ब्लेक? तपाईं स्पिनको लागि कस्तो मीठो लिनु पर्छ? रूले
जब चिप्स तल छ, लास वेगास जान्छ कि कसरि पार्टी
के तपाईं लास वेगासमा नयाँ वर्षको ईभर 2014 का थिए? यदि होइन भने, यो 2015 को लागि बचत सुरू गर्ने समय हो। पट्टीमा प्रत्येक क्यासिनोले राम्रो समयको एक क्लासिक रातको लागि आफ्नो पार्टी मांसपेशीलाई फ्याक्च्याउने।
ड्र्याक, ब्रुनो मार्स, टोनी
सबै समयका शीर्ष पाँच क्यासिनो चलचित्रहरू
क्यासिनो खेलहरू, फिल्महरू, खेलहरू; हामी सबै बेला-बेलामा थोरै मनोरञ्जन मन पराउछौं। तर के हुन्छ जब हाम्रो दुई ठूला माया - चलचित्र र क्यासिनो - मिल्छ? अन्त नतिजा हो कुनै पुलिस वा यी स्क्रीन
क्यासिनो इतिहास - यो कहाँ सुरु भयो?
यदि तपाईं अनलाइन क्यासिनो खेलहरू खेल्न मनपराउँनुहुन्छ भने, तपाईं पहिल्यै पहिल्यै परिचित हुनुहुनेछ मजा, उत्साह र मनोरन्जन जुन उनीहरूले तपाईंको आफ्नै घरको सुविधा प्रदान गर्छन्। तर त्यस्तो मनोरन्जन कहाँबाट आयो? र कसरी क्यासिनो खेल भयो
जुबा - Wahlberg गतिशीलता वा अन्तिम buzzkill हो?
एकपटक, चलचित्र उद्योगले क्लासिक फिल्म लिन र यसलाई समकालीन रीमेकमा बदल्नको लागि छनौट गरेको छ। अल्फी, एनी, र एमिटीभिल डरावनीको पाइला पछ्याउँदै, जुन जुन नयाँ आईकन्याक फिल्म दिन्छन्
म्याट्रिक मार्टिन: द क्यासिनो क्रूज लाई नोरेन को बारे मा
पूर्वी तटमा स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका, शक्तिशाली ग्रैंड स्ट्रैंडको बीचमा समुद्र तट दक्षिण क्यारोलिनामा, Myrtle Beach देशको सबैभन्दा आकर्षक पर्यटन स्थलहरू मध्ये एक हो।
Subtropical जलवायु को एक जीत मिश्रण, र
जैकपोट र उदार: कैसीनो विजेताहरू जसले यो पनि दिन्छ
कल्पना गर्नुहोस्: यो आइतवार, नोभेम्बर ,०, २०१ 30 हो, तपाईं लस भेगासमा बस्नुहुन्छ र शहर बाहिरका तपाईंको पुरानो साथीले तपाईंलाई भ्रमणको पैसा तिर्ने निर्णय गरेको छ। तपाईं उत्सुक जुवा खेलाडी हुनुहुन्न तर उहाँ वास्तवमा तलको कार्यलाई प्रेम गर्नुहुन्छ
विश्वमा शीर्ष5कैसीनो स्थलहरू
यदि तपाईंलाई क्यासिनो खेलहरू मनपर्‍यो भने, तपाईंलाई थाहा छ सेटिंग, वातावरण, छनौट र मूल्य महत्त्वपूर्ण छ। तर त्यहाँ धेरै विकल्पहरूको साथ, तपाईं कसरी खेल्ने भनेर छनौट गर्नुहुन्छ? हामीले तपाईंको लागि अनुसन्धान गर्यौं र जाँच गर्‍यौं
Bandit Rides On: स्पिन को लागि स्लॉट लेना (भाग एक)
यो 1891 छ संयुक्त राज्य अमेरिका of अमेरिका। Wrigley कम्पनी मा स्थापित छ शिकागो साबुन र बेकिंग पाउडर बेच्दै। च्युइंग गम आउनु अघि यो १२ महिना हुनेछ। न्यु योर्कमा, कार्नेगी हलको पीटरसँग यसको भव्य उद्घाटन छ
जुआ सुविधा (भाग 10) सहित शीर्ष 1 टिभी शो एपिसोडहरू
हामीले क्यासिनो चलचित्रहरू र क्यासिनो गीतहरू हेरेका थियौं तर टिभी नि? धेरै मिलियन मानिसहरूले दैनिक रूपमा विश्वभरि टिभी हेर्छन्, र लाखौं व्यक्तिहरू हरेक दिन अनलाइन क्यासिनोमा खेल्छन् - त्यसैले तपाईं त्यहाँ अपेक्षा गर्नुहुन्छ
क्रेप्स गेम र रेकर्ड पुस्तकहरुमा यसको मार्ग रोलियो
नम्बरहरू चकित पार्न सकिन्छ। उदाहरण को लागी: यदि तपाईं कागज को एक टुक्रा 45 पटक गुना गर्न सक्नुहुनेछ, यो चन्द्रमा पुग्नेछ। क्यासिनोहरू संख्याको बारेमा हो: ठूला संख्याहरू, थोरै नम्बरहरू, विजयी नम्बरहरू। प्रत्येक टेबल वा कार्ड खेल संग एक सांख्यिकीय छ
स्पिनको लागि स्लॉट लिँदै (दुई भाग)
यो त्यो यूरेका पल हो। पछाडि सबै टुक्राहरू पस्छन् र इतिहास बनाइन्छ। अधिक आविष्कारहरू एक प्रक्रियाद्वारा संचालित हुन्छन् विकास र परिशोधन: कैंची सोच्नुहोस्, लाइट बल्ब, साइकल। स्लट मिसिन कुनै अपवाद थिएन।
$ 2.4 मिलियन जैकपोट जीत - जे-लोको आमा सहित!
हामी भेडा र अनलाइन दुबै ठूला ज्याकपोट paydays को धेरै कथाहरूको बारेमा सुनेका छौं, तर ज्याकपॉट जितको बीचमा एक लोकप्रिय आवर्ती संख्या देखिन्छ, the २.$ मिलियन को आंकडा नियमित रूपमा पप हुँदैछ। यो आवर्ती आंकडा एक निफ्टी हो
यो इलेक्ट्रिक हो: स्लट्स प्लग इन र क्यासिनो पावर माथि
यो 1963 हो। यस बर्षमा, बीटलमानिया जीवनमा उत्रिनेछ, मार्टिन लुथर किंग नागरिक अधिकारको लागि स fighting्घर्ष गर्दै पक्राउ पर्नेछ, भियतनामको युद्ध चर्को हुनेछ र राष्ट्रपतिको हत्या हुनेछ।
यो आधुनिक समय हो। संसार छ
लाइट्स ... क्यासिनो ... कार्य ...
एक पल्ट एक पल्ट, हलिवुड ए-लिस्ट सितार जो केहि गंभीर येन वा युआन कमाने को चाहान चाहते थियो उनको गोपनीय रूप देखि उनको निजी विमानहरु र एशिया को टाउको मा हॉप गर्नेछन्। ज्ञानमा सुरक्षित राख्नुहोस् कि उनीहरूको गोप्य सुरक्षित थियो, तिनीहरूले गर्थे गोली मार a
कैसीनो घर आउछ: अनलाइन स्लॉट र भविष्य
जीवन चकलेटको बाकस जस्तो छ। १ 1994 XNUMX In मा, फोरेस्ट गम्प, लायन कि,, फ्रेन्ड्स, र सोनी प्लेस्टेशन सबैले डेब्यू गरे। चार्टहरूमा, ओएसिस र ब्लर यसलाई झगडा गर्दै थिए। कर्ट कोबेनले च्यानल टनेलले आत्महत्या गरे
फेरी क्यासिनो लडाई: तपाईंको विट्स विन गर्न प्रयोग गर्दै
सबै प्रेम र युद्ध मा निष्पक्ष। खेलाडी र क्यासिनो बीचको लडाईमा, लुटका चीजहरू साझेदारी हुन्छन् र अनौठोहरू कुनै गोप्य कुरा हुँदैन। क्यासिनोको नाफा घरको किनारबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ: पैसाको मार्जिन जुन समाप्त रहन्छ
22 सदीमा अनलाइन स्लॉट
भविष्यवाणी गर्नु जोखिमपूर्ण व्यवसाय हो। वास्तवमा: यो व्यवसाय हो जुन क्यासिनो र खेलकुदहरूमा निर्मित हुन्छ। १ 1994 21 In मा, विश्वको पहिलो अनलाइन क्यासिनोले इन्टरनेटमा हिट गर्‍यो। यो २१ बर्ष भयो। यो अहिले कहाँ छ र के गर्छ
जब चिप्स तल छन्
चिप्स ... को नागरिकको लागि संयुक्त राज्य अमेरिका, एक चिप गहिरो तलामा, सानो टुक्रा टुक्रा, आलुको टुक्रा हो। मा UK, चिपहरू पिठोको माछाको साथ परेको हुन्छ, कागजमा बेरिएको, र काठको काँटाले खाइन्छ। मा
पचास रूपैयाँ हरियो: लिंग र जुवा
ग्रे फिल्म को नयाँ फिफ्टी शेड आलोचकहरु को एक मिश्रित स्वागत प्राप्त हुन सक्छ तर अनास्तासिया स्टीलको कामुक बप्तिस्माको काख्दो कथा, सींग का अरबपति व्यापारी र S&M aficionado क्रिश्चियन ग्रेको हातमा, एक हो
क्यासिनो क्लासिक्स तपाईले कहिल्यै सुनेको छैन ...
जुआ जुआको हो, तर हामी यो थाहा छैन जस्तै ... संसारका सबै भन्दा प्रसिद्ध क्यासिनोहरूको सतह तर्फबाट स्क्रैच र तपाईले अस्पष्ट, सानो ज्ञात, खेलको सम्पत्ति पत्ता लगाउनुहुनेछ।
हामी सबै मा एक साँझ मजा आयो
काठ मा दस्तक: कैसीनो तल मा सुपरस्टेशन
के तपाईं 'काठ लुगा' भन्न भन्नुहुन्छ? सीढीमा हिंड्नदेखि बच्न सावधान हुनुहुन्छ? के यो घडी स्टेशन हो जब काली बिरालो तपाईंको राती पार गर्दछ? के तपाईं एक भाग्यशाली आकर्षण छ कि तपाईं संधै क्यासिनो लिनुहुन्छ?
क्यासिनो जो स्पिन गर्न प्रेम र क्यासिनोसमा जित्नुहुन्छ
कल्पना गर्नुहोस्: तपाईं 21 वर्षको उमेर हुनुहुन्छ, तपाईंको छवि हजार किशोर किशोरावस्थाको पर्खालबाट टाढा छ, तपाईं संसारको सबैभन्दा लोकप्रिय केटा ब्यान्ड को एक पाँच हो। तिम्रो रातमा के गर्दैछौ तिमी?
10 शीर्ष क्यासिनो युक्तिहरु: घर को धुन को लागि एक गाइड
सबैको क्यासिनोमा सानो कार्यलाई माया गर्नुहुन्छ। को सहर रूले पा wheel्ग्रा, कार्डको पालो, एड्रेनालिनको बृद्धि जब रिलहरू तपाईंको पक्षमा घुम्न थाल्छन्। यो धेरै रमाईलो हुन सक्छ र
ब्ल्याक जैक र बिकिनी:5क्यासिनो जहाँ जीवन एक समुद्र तट हो
जीवनमा धेरै कुराहरू सुधार गर्न सकिन्छ तिनीहरूलाई समुद्रको नजिक। एक समुद्र दृश्य संग छुट्टियों को घर, मा एक रोमांटिक डिनर समुद्र तट, सर्फ रोल को रूप मा एक हम्मा मा एक नरम स्नूज।
Casino.com समाचार र क्यासिनो ...